Ihe Gburugburu Obodo Obodo - WRSP
Obodo dị iche iche na United States aghọwanyewanye nke okpukpe na n'ụzọ ime mmụọ na iri afọ ole na ole gara aga. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta emeela nchọpụta nke obodo ndị na-eme ka ọ ghara ịba ụba otú e si ahazi okpukpe na mmekọrịta ime mmụọ ma biri n'otu obodo. Njikọ ndị ahụ Ihe ndi ozo e gosipụtara ebe a. Ọtụtụ n'ime oru ndị a edepụtara ebe a bụ ndị mmekọ nke Ụlọ ọrụ Pluralism na Mahadum Harvard, ọtụtụ ọrụ jikwa arụ ọrụ maka obere oge na nzube nke atụmatụ.
Okpukpe nke Ụwa na Project Richmond
Okpukpe Worldwa na Richmond Project (WRR) bụ ọrụ nyocha na-aga n'ihu nke nwere ebumnuche ya na-agbaso ụdị okpukpe / mmụọ dị iche iche dị na obodo Richmond, Virginia. E nwere ihe karịrị narị ọgbakọ ụka asatọ ugbu a na mpaghara Richmond na-anọchite anya ọtụtụ ọdịnala okpukpe ụwa. WRR depụtara ọgbakọ ọgbakọ ọ bụla a ma nye profaịlụ nke ọgbakọ ọgbakọ ahọpụtara. WRR depụtara, ma kọwaa ụfọdụ, nke ọtụtụ, otu dị iche iche nke obodo na ihe omume sitere na ma ọ bụ mmekọ na ọdịnala okpukpe na nke ime mmụọ dị na Richmond.
Nnyocha ụmụ akwụkwọ na Community North Buddhist nke North America
Emebewo nyocha nke ụmụ akwụkwọ na North American Buddhist Communities maka 2015 na William na Mary University na Williamsburg, Virginia. A gosipụtara ọrụ ahụ n'ihu ọha site na blọọgụ wee hazie ya n'okpuru mmụọ nke Prọfesọ Kevin Vose na usoro Buddha na America. Obodo ndị Buddha gafee United States na-ekpughere, na-ekwusi ike na obodo dị na mpaghara Virginia.
Arch City Religion bu oru nkuzi ugbu a (2019) ana ewulite na Mahadum St. Louis. A kọwara ọrụ ahụ dị ka ndị a:
“Dị ka ọrụ nkuzi, Arch City Religion na-achọ ọ bụghị nanị inye ndị na-eme nchọpụta, ụmụ akwụkwọ, ndị nta akụkọ, na ọha na eze ihe ọmụma bara uru, kamakwa iji akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị bara ụba nke St. Louis na-eche echiche site na nkà nke nchọpụta; ịmụta ịmata ọdịiche dị na ozi na echiche; iji nyochaa ihe, ememe okpukpe, na oghere maka ihe dị dị na maka ihe zitere; na iji ezi nkwurịta okwu banyere akụkọ ihe mere eme na omume ndị dị mgbagwoju anya e nwere na St. Louis. ”
A Njem site NYC okpukpe
Njem njem NYC bụ ọrụ na-aga n'ihu nke malitere na July 9, 2010. Òtù ahụ kwuru na ya ozi bụ “inyocha, depụta ma kọwaa site na magazin anyị na usoro agụmakwụkwọ ndị ọzọ banyere oké mgbanwe okpukpe ndị na-ewere ọnọdụ na New York City.” Ihe oru ngo a bu ihe di iche iche di iche iche di iche iche banyere obodo a nke bu na ndi mmadu gha aghota nke oma otu ihe di otua na eme ka obodo ahu nwee obi uto. Ọ na-eje ozi dị ka incubator na onye nkụzi maka ụzọ ọhụrụ nke ịme akụkọ okpukpe na ịghọta obodo ahụ.
Okpukpe dị iche iche na New Orleans
Site na 1998-2006, Dr. Timothy Cahill na Mahadum Loyola, New Orleans duziri ọrụ iji gosipụta ụdị okpukpe dị iche iche na New Orleans, na-enwe ọganihu pụrụ iche n'oge ọkọchị nke 2003.
Okpukpe ụwa na Arizona
Ihe oru ngo a toro site na uzo ochichi di na Arizona State University nke Dr. David Damrel meputara nke umu akwukwo sonyere na oru ubi na achoputa onu ogugu nke ndi okpukpe di iche iche na mpaghara Phoenix. Ihe oru ngo a bu oge 2003-2007.
Ebe Okpukpe nke Orlando, Florida
Ihe oru ngo a na Rollins College bidoro na 1998 ma onye isi ya bu Dr. Yudit K. Greenberg na Dr. Arnold Wettstein. Ebum n’uche bụ ka ụmụ akwụkwọ soro na-amụ ihe gbasara okpukpe nke Orlando. Ọmụmụ ihe ahụ chọrọ inye akụkọ ihe mere eme zuru ezu na-elekwasị anya na ịrị elu nke obodo ọhụrụ na ntinye ha n'ime ndụ na ọdịbendị nke Orlando. Ndi isi oru ngo weputara akuko oru ngo: Nkọwa nke okpukpe Florida nke dị na Florida - Dr. Yudit K. Greenberg na Rev. Dr. Arnold Wettstein
Portland Muslim History Project
Portland Muslim History Project malitere na 2004 na Reed College n'okpuru nduzi nke Dr. Kambiz GhaneaBassiri. Ebumnuche nke oru ngo a bụ ịkọ akụkọ ihe mere eme nke obodo ndị Alakụba wuru na Portland, Oregon, na-achọ ịkọwa n'ụzọ zuru ezu otú ọdịnala ndị Alakụba si gbanye mkpọrọgwụ n'ime gburugburu ebe obibi nke obodo America. Ihe oru ngo a jikọrọ ya na oru ngo buru ibu nke Dr. Kambiz GhaneaBassiri, A History of Islam in America: Site na New World na New World Order (Oxford University Press, 2010).
Buddha na Virginia Beach
Mgbe otu ndị mọnk Buddhist dị ọcha na-eche mmegide ihu imeghe ụlọ nsọ na ebe agụmakwụkwọ na obere ime obodo na Virginia, Dr. Steven Emmanuel rụkọtara ọrụ na Ven. Chuc Thanh iji nye ọha na eze na Virginia Wesleyan College na Buddha na Virginia Beach n'oge ọkọchị nke afọ 2009. Ọrụ ahụ dugara n'usoro usoro ọmụmụ ọha na eze iji kụziere ndị obodo nọ na Buddha ihe karịrị afọ atọ. E mepụtara otu ihe nkiri, Ibi Ndụ n’Ala Dị Ọcha, nke dị na ya Vimeo.
Vrindaban oru ngo ohuru
Dr. Greg Emery rụrụ ọrụ dị ka onye isi na onye otu Ngalaba nke Global Leadership Center na Mahadum Ohio ruo oge opupu ihe ubi nke 2015. Malite na 2003 ọ duru ụmụ akwụkwọ Mahadum Ohio na nyocha nke edepụtara ma nyochaa obodo New Vrindaban (Hare Krishna) dị nso na Moundsville, West Virginia. Ihe oru ngo a meputara otutu nyocha: Nchịkọta nke Research na Omume nke Obodo Hindu nke New Vrindaban (Nkebi nke M) (2011), Nchịkọta nke Nyocha na Omume nke Obodo Hindu nke New Vrindaban (Nkebi nke Abụọ) (2011), na Ọhụụ nke Ndị Obodo maka Ọdịnihu na 40th Anniversary of New Vrindaban (2009), nakwa dị ka ọtụtụ akụkọ nyocha ụmụ akwụkwọ.
Ndi Hindu na ndi obodo di na North Texas
Dr. Pankaj Jain bụ osote prọfesọ nkà mmụta ihe ọmụmụ, nkà ihe ọmụma, na okpukpe na Mahadum North Texas. O bu onye isi oche nke Summit Sustainability Summit na onye ndu ndi otu India Initiatives. Dr. Jain duziri nchọpụta banyere omume okpukpe na nke obibi nke ndị Hindu na ndị Jain na North Texas. Ihe oru ngo ya nyochara njikọ dị n’etiti ọdịnala okpukpe nke ndị Hindu na obodo Jain na mpaghara ha na omume ha. Ihe oru ngo a meputara onu ogugu nke profaịlụ nke ndi Hindu na ndi otu Jain na North Texas ma jikotara ya na akwukwo ya. Dharma na Ọmụmụ nke Ndị Hindu Communities: Nri na Nkwado (2011).
Okpukpe nke Na-agbanwe Agbanwe nke Atlanta, Georgia
Dọkịnta Gary Laderman, Goodrich C. White prọfesọ na onye isi ngalaba ngalaba okpukperechi na Mahadum Emory bidoro nchọnchọ nyocha banyere mgbanwe okpukperechi dị n'Atlanta, Georgia na 1998. Ebumnuche ahụ nwere ebumnobi abụọ: ịchịkọta ozi ndị bụ isi gbasara ndị Hindu, Buddhist, na Obodo ndị Alakụba bi na Atlanta mepere emepe na ịgagharị ụzọ ụzọ ọdịnala okpukpe ọhụrụ ndị a si kwekọọ, yana ịkpụzi, emume olili ozu ndị America. Ihe oru ngo a meputara otutu onu ogugu ndi mmadu ma jikoo ya otutu akwukwo abuo nke Dr. Laderman dere: Okpukpe nke Atlanta: Okpukpe Dị iche iche na Centennial Olympic Olympic. (Atlanta: Ndị Ọkà Mmụta Pịa), 1996; Ihe ndị dị nsọ: àgwà ndị America na-aga ọnwụ, 1799-1883 (New Haven: Yale University Press), 1999; ma Ịnọ na Peace: A Culture Cultural History of Death and the Home Funeral in the Twentieth Century America (Mahadum Oxford University Press), 2005.
Buddha, Hindu, Jain, Muslim na Sikh Religious Centres in Atlanta
Na 2002, Dr. Kathryn McClymond, onye prọfesọ na onyeisi oche nke ngalaba ọmụmụ okpukpe na Mahadum Georgia State, malitere oru nyocha na Buddha, Hindu, Jain, Muslim na ụlọ okpukpe okpukpe Sikh na na Altanta, Georgia. McClymond na ụmụ akwụkwọ ya mepụtara ọtụtụ profaịlụ na otu dị iche iche na ọdịnala ndị a.
Ngalaba Okpukpe nke 1965 na-abata na Northern Ohio
Dr. David Odell-Scott, onye isi na Kent State University, na Dr. Surinder Bhardwaj, bụ prọfesọ na-arụ ọrụ na ngalaba ndị dị na Kent State University, kwalitere ọrụ nyocha banyere òtù okpukpe ndị si mba ọzọ na Northern Ohio na 1999. Ebe a na-emepụta ebe a na-arụ ọrụ na Buddhist, Hindu, Jain, Sikh, na omenala ndị Alakụba, yana agbụrụ Ndị Kraịst agbụrụ.
Otutu di na 'Belt Bible': nkewa Di iche iche di na South Georgia
Dr. Michael Stoltzfus, onye prọfesọ na-amụ banyere okpukpe na Mahadum Valdosta State University, malitere ihe omume nyocha n’afọ 2006 banyere “Ọtụtụ ihe na‘ Belt Bible ’: Mapping the Diversity Religious of South Georgia.” Ebumnuche nke ọrụ ahụ bụ ịdepụta mgbanwe akụkọ ihe mere eme na ọnụọgụ okpukpe nke mpaghara ahụ na ịchọpụta ụfọdụ nsogbu ndị obodo okpukpe pere mpe na-eche ihu. Ihe oru ngo a kwusiri okwu ike banyere onodu ohuru di iche iche nke otutu uka ya na obodo ndi Juu nke mere ememe nke otu narị afo-ndi ohuru nke ndi Alakụba, ndi Hindu, ndi Protestant Korea, ndi Katoliki Latino, na ndi ozo.
Esemokwu okpukpe dị na South Carolina
Dr. Claude Stulting na Dr. Sam Britt, ndị òtù nkuzi nọ na Mahadum Furman, malitere ụlọ ọrụ nyocha na 1998 na okpukpe pluralism na South Carolina. Ulo oru a nwere atimatu ato: ichota ebe odida okpukpe nke South Carolina, nyocha anya nke otu ndi di iche iche na North Carolina, na nyocha nke ndi di iche iche na Midlands nke South Carolina, na-eleba anya na ebe obibi Columbia. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke profaịlụ nke otu mepụtara site na ngo.